Panoragram ဖြင့် Instagram တွင်မဖြတ်ရသေးသောမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့တင်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ယေဘုယျ, လဲ tutorial
သေချာတာပေါ့ သင်သည် Instagram ၏ရှည်လျားသောဓာတ်ပုံများ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမတွေ့ရပါ ခွဲခြားခြင်းမရှိ။ သင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်နိုင်သောဓာတ်ပုံများ ဘယ်ဘက်မှညာဘက် scrolling။ ဓာတ်ပုံအမြောက်အများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသင်၏အကောင့်ကိုအလွန်ထိမိစေနိုင်သည်။ Panoragram သည်အသင့်တော်ဆုံး App ဖြစ်သည် ကက။
ယနေ့တွင် ရှင်းပြပါရစေ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သင်၏ Instagram တွင်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့တင်မည်နည်း သူတို့အကြီးကြည့်ရှုပါ။ ပို့စ်တစ်ခုတည်းတွင်ဓာတ်ပုံအမြောက်အမြားထုတ်ဝေရန်ရွေးချယ်မှုမှပိုမိုလွတ်မြောက်ရန်သီးသန့်ဖန်တီးထားသော application အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာအားလုံးကိုပြောတာ Panoragram.
1 Panoragram သည် Instagram ပေါ်ရှိမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်
2 Panoragram ကိုအဆင့်တစ်ဆင့်သုံးပါ
2.2 App မှ logo ကိုဖယ်ရှားပါ
2.3 Instagram သို့တင်ပါ
3 Panoragram, သင်၏ Instagram အကောင့်အတွက်အရည်အသွေးအပိုဆုတစ်ခု
Panoragram သည် Instagram ပေါ်ရှိမြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်
ဤလျှောက်လွှာအကြောင်းသင်မကြားရသေးပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။ သူတို့က မိတ္တူကူးကိရိယာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်သီးသန့်အပ်နှံထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်. အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည် "ပြန်လည်" ငါတို့နှင့်အတူအခြားအကောင့်တစ်ခု၏ထုတ်ဝေ "ပြန်လည်" နိုင်သည့်အတူ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ထူးကဲကောင်းမွန်သော application မှရရှိနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုချဲ့ထွင်ပါ။ လူအများပိုပိုပြီး“ ပညာရှင်ပီသစွာ” Instagram ကိုစပွန်ဆာပေးခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ ဤသည်အဘို့, သူတို့ကအမြဲကြည့်ရှုနေကြသည် အခြားအကောင့်များမှထွက်မတ်တပ်ရပ်ရန်မူလနည်းလမ်းများ နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစာပမြေားပါစေ။
ဓာတ်ပုံအရည်အသွေး၊ ရိုက်ချက်အခက်အခဲမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ လျော့နည်းဘုံစာပေရဖို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းကို Grid များစွာ ခွဲ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများပြုလုပ်သောပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပရိုဖိုင်းတွင် mosaic အနေနှင့်မြင်နိုင်သည်။ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံတစ်ပုံသာလိုအပ်သည် ရလဒ်များသည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကငါတို့ပဲ လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ။ ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ကငါတို့ပြောတာပါ အခမဲ့ကြောင်း application တစ်ခု။ ကြော်ငြာလည်းမပါပါဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုသည်အက်ပလီကေးရှင်း၏ရေစာမရရှိပါကစက္ကန့် ၃၀ ကြာသောကြော်ငြာဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ သူတို့ reel ထဲမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ် ဓာတ်ပုံများ။ ထုတ်ဝေမှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ချင်သောဓာတ်ပုံပေါ်မလာပါက၎င်း၏တိုင်းတာမှုများသည်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်၎င်းသည်ပိုမိုရှည်လျားသောပုံသဏ္hasာန်ရှိစေရန် ၄ င်းကိုအထက်နှင့်အောက်မှ (အလျားလိုက်) ဖြတ်တောက်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
ကျနော်တို့ပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်ပါ ငါတို့တို့တွင်ရှိသောရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများအနက်မှတစ်ခုကိုထုတ်ဝေလိုသည်။ လျှောက်လွှာကိုပြသသည့်မျက်နှာပြင်မှာဤကဲ့သို့သောဖြစ်သည်။
ပြီးတာနဲ့ရွေးချယ်ပါ ပုံရိပ် လိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်များ ငါတို့ထုတ်ဝေတာကမင်းလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လိုချင်သောဓါတ်ပုံကိုရွေးချယ်သောအခါ, လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်ကနှစ်ခုခွဲဝေတာဝန်ရှိသည် သို့မဟုတ်ပိုများသောအစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်ပါက, အရွယ်အစားပေါ်မူတည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့မျိုးစုံထုတ်ဝေအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် နှင့်ဖန်တီးထားသောဓာတ်ပုံအစိတ်အပိုင်းများကိုမှန်ကန်သောနိုင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ပါ။
App မှ logo ကိုဖယ်ရှားပါ
ဘယ်အချိန်မှာလျှောက်လွှာ ကျွန်တော်တို့ကို preview ကိုပြပါ လျှောက်လွှာထဲရှိမြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ၊ ၎င်းတွင် Panoragram App ၏အမည်နှင့်အတူရေစာသေးသေးလေးတစ်ခုထည့်ထားသည်။ အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Panoragram တွင်ကြော်ငြာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် App မှ logo ကိုဖယ်ရှားလိုပါကစက္ကန့် ၃၀ ကြာကြော်ငြာသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ပုံရိပ်ကိုအမှတ်အသားပြုရန်မလိုလားပါကသင့်တော်သောစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခပေးဗားရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်လျှင်အခြားအက်ပ်များသာလုပ်နိုင်သည်။
ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "လိုဂိုဖယ်ရှားပါ" Option ပေါ်လာသည့်အခါမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည် "အခုကြည့်ပါ"။ ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်လည်းဆက်နွယ်သောနာရီအသေးစားနှင့်ပတ်သက်သောဗွီဒီယိုသေးသေးလေးကိုဖွင့်ပြမည် 30 စက္ကန့် countdown အတူ။ ပြီးတာနဲ့သူတို့လွန်ပြီ ငါတို့ဓာတ်ပုံဟာလိုဂိုမပါဘဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် Panoragram ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မဖြတ်ရသေးသောမြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ချက်ကို Instagram တွင်တင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကသည် "Instagram ပေါ်တွင်မျှဝေပါ" ကိုနှိပ်ပါ။ အခုပုံပြင်ဒါမှမဟုတ်သတင်းအပိုင်းမှာထုတ်ဝေချင်တာလားလျှောက်လွှာတင်တယ်။ ယုတ္တိနည်း ကျနော်တို့သတင်းထုတ်ဝေကို select လုပ်ပါ ငါတို့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိပဲတွေ့နိုင်သည်။
ပြီးပြီလွယ်ကူသည်မဟုတ်လား။ ဒီလို Instagram ကို Instagram နဲ့အတူဖန်တီးနိုင်ဖို့သင်ဟာဗဟုသုတအများကြီးလိုအပ်တယ် (သို့) တိကျတဲ့ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့သင်စဉ်းစားမိရင်၊ လူပျို Panoragram ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာသည် သင်တစ် ဦး အရည်အသွေးထုတ်ဝေအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။
Panoragram, သင်၏ Instagram အကောင့်အတွက်အရည်အသွေးအပိုဆုတစ်ခု
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း သင့်ရဲ့ instagram အကောင့်အတွက်အရည်အသွေးအချက်တစ်ခုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်လုံးဝမလွယ်ကူပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည့်စာပေများကိုကြည့်ပါ သူတို့ကအရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်ကိုဆက်ကပ် မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထင်ရှားစေချင်တယ်ဆိုရင်။ ထို့အပြင် သင်၏ပုဂ္ဂလိကအကောင့်၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်
သင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးပြီမဟုတ်လား။ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့ link ကိုထားခဲ့ပါ။
ရေးသားသူ: ဘဲ Dev ။ SA
သင်၏ Zoom ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင် virtual Background ထည့်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Instagram မှာမလိုအပ်တဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများတင်နည်း
Sonos သည် Arc ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင် soundbar နှင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လွှတ်သည်